Hnin Thway Yu Aung
Notice: Undefined index: data in views_plugin_cache->restore_headers() (line 238 of /var/www/html/missuniversemyanmar.com/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_cache.inc).
Lashio City Director - Ma Aye Moh Moh Zaw
လားရှိုးမြို့၏ City Director အဖြစ်​ Ma AYE MOH MOH ZAW (MD; Pan - dora Entertainment ) မှ တာဝန်​ယူ ဆောင်​ရွက်​​သွားပါမည်။
Donation to YCDC
27.1.2018 နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းခရိုင် စမ်းချောင်းမြို့နယ် နောက်ဖေးလမ်းကြား စည်းကမ်းမဲ့စွန့်ပစ်အမှိုက်များ ရှင်းလင်းသိမ်းဆည်းဆောင်ရွက်သည့်ဝန်ထမ်းများအား MISS UNIVERSE MYANMAR ORGANIZATION မှ မုန့်များ၊ အချိုရည်များနှင့် ရေသန့်များကို သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
Mandalay & Myitkyinar City Director - Maran Seng Naw
မန္တလေးမြို့နှင့် မြစ်ကြီးနား မြို့များအတွက် City Director အဖြစ် Maran Entertainment ရဲ့ Founder ဖြစ်သူ တေးသံရှင် မရန်ဆိုင်းနော် မှ ဆက်လက်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Muse City Director - Designer Sai Latt (Maka)
မူဆယ်မြို့ရဲ့ City Director အဖြစ် ဒီဇိုင်နာ စိုင်းလတ် (Maka) မှတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Yangon City Director - Dr. Nay Htut
ယခုနှစ် (၇) ကြိမ်မြောက် မယ်စကြာဝဠာမြန်မာပြိုင်ပွဲကြီးတွင် ရန်ကုန် အရှေ့ပိုင်း၊ အနောက်ပိုင်း၊ မြောက်ပိုင်း နှင့် တောင်ပိုင်းခရိုင် ကိုယ်စားပြုအလှမယ် (၄) ဦးကို ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲထဲတွင် တပြိုင်နက်ရွေးချယ်ရန်အတွက် City Director အဖြစ်
• Dr. Nay Htut •
Bago City Director - W May Shin Sein
(၇) ကြိမ်မြောက် မယ်စကြာဝဠာမြန်မာပြိုင်ပွဲကြီးတွင် ပဲခူးမြို့ကိုယ်စားပြုအလှမယ်အား တာဝန်ယူရွေးချယ်ပေးမည့် City Director အဖြစ် W မေရှင်းစိန် မှ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်မှုတွေဆက်လက်ရရှိပါစေ။
• Bago City Director - W May Shin Sein •
MUM Organization ၏ ပရဟိတ လုပ်ငန်းစဉ်များ
Miss Universe Myanmar Organization မှ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ကို အောက်ပါ Link တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
MUM 2014 မိတ်ဆက်ပွဲ
Tuesday, December 9, 2014 - 18:43
Miss Universe Myanmar Organization ၏ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များနှင့် Organization နှင့်အတူ လှုပ်ရှားမှုများ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော အလှမယ်များ၏ လတ်တလော ဆောင်ရွက်နေမှုများအား လေးစားစွာဖြင့် အသိပေး တင်ပြအပ်ပါသည်။
Hsaung Moe Hnin [Bagan]
Hnin Thway Yu Aung [Bago]
August Moe [Dawei]
Myint Mo May [HpaAn]
Ling Ling [Hpakant]
Amy Nay Linn Than [Kalay]
Angel Ko [KyaukSe]
Khin Myat Myat Thu [Loikaw]
Thet Hnin Swe [Magway]
Noe Htet Htet Naing [Mandalay]
Ei Shwe Sin May [Mawlamyine]
Kar Yan Cho [Meikhtila]
Eaint Thet Hmue [MinnBu]
Sue Ro Hnine [Mogok]
Nu Shwe Yee Phyoe [MohNyin]
Nan Htet Htet Lin [Myawddy]
That Tant Kabyar [Myeik]
Su Myat Phoo [NayPyiTaw]
Naw Shwe Ywet Hlwar [Pathein]
Me Me Moe Thae Tun [Pyay]
Htut Myat Shwe Yee [PyinOoLwin]
Yoon Satt Paing [Sagaing]
Kay Khine [Sittwe]
Nan Mway Phoung Loong [Tachileik]
Shun Lae Yati [Taunggyi]
Amara Myat Noe [Taungoo]
Khing Kyi Pyar [Yangon South]
Htun Eain Dra Shin [Yangon North]
Ei Thandar Tun [Yangon West]
MUM 2018 - Winner
Hnin Thway Yu Aung - MUM 2018
Best National Costume 2016
MUM 2016 National Costume
MUM 2016 - HHH Activities
MUM 2017 - 26 Contestants Intro
Official Mobile Contents Partner
© 2013 - 2018 Miss Universe Myanmar. All Right Reserved. Site Visitors -
Developed by: New Wave Technology